बलियो ‘सिन्डिकेट’ कमजोर ‘राज्य’
सडक यातायात नेपालीको यात्राका लागि विकल्पहीन विकल्प हो । जलमार्गको सम्भावना नभएको, रेल मार्गको विस्तार भइनसकेको र हवाईमार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँचबाहिर रहेकाले सडक यातायात एकमात्र यात्राको माध्यम हो । तर, पछिल्लो समयमा दिनप्रतिदिन बढ्दो सवारीसाधनको दुर्घटनाले नेपालको सडक यातायात कति असुरक्षित र अव्यवस्थित छ भन्ने दृष्टान्तलाई पु..
सामान्य लज र सोल्टीको मूल्य एउटै हुनुपर्छ भन्न मिल्छ ?
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यतिवेला दुई धारमा बाँडिएको छ । निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबीच..
मधेसमा भारत विरोधी लहर
मधेस प्रदेश प्रतिष्ठाको सवाल मात्र होइन, मधेसीको पहिचान पनि हो । सिङ्गो मधेसको विकास र परि..
ज्यानमारा सडक : दसैँमा घर जाउँ कि नजाऊँ ?
दैनिकजसो भइरहने दुर्घटनाका खबरले गाउँमा रहेका आफन्तको मन भत्भती पोल्न थालेको छ । नजाउँ भने..
बहस :सीके लाल र लेन्डुप लेखक
“तिन (सामान्य नेपाली जनता) लाई थाहा छ– तिनको देशको अक्षुण्ण स्वतन्त्रताले आफ्नो जनताको खान..
यसरी हुन्छ सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि
हामी अहिले विकास र समृद्धिको कुरा जोडतोडसाथ गरिरहेका छौं । बहुआयामिक बन्दै गएको वैश्विक परिवेशमा चलनचल्तीमा रहेको पुँजीवादी विकासको मोडल र राज्य नियन्त्रित समाजवादी मोडलका आ–आफ्नै गुण, दोष तथा कमीकमजोरी देखापरे । पुँजीवादी अर्थात् उदारवादी र नवउदारवादी मोडलले व्यक्ति र बजारलाई नै प्रधान मान्यो । यसले व्यक्ति धनी भयो भने समाज धनी..
लाचार, विवश, उजाड र उर्जाविहीन प्रचण्ड
नेपालमा अहिले सबैभन्दा लाचार मानिस कोही छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । उनको लाचारीको कुनै सीमा नै छैन । अनेक कामका एजेण्डाको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले न केही काम गर्न सके, न गर्न सक्नेवाला नै छन् । अगाडि पछाडि मात्र होइन चारैतिर तगारो छ उनको । पाइलैपिच्छे खाडल छ । दायाँ पहिरो […]
क्रान्तिकारी पत्रकारिताका मुख्य मुद्दा
अहिले विश्वमा सूचनाको महत्व निकै बढी छ । रक्तसञ्चारविनाको जीवन असम्भव भएजस्तै सूचना सञ्चारविनाको विश्व कल्पना गर्न सकिँदैन । सूचना भनेको मूलतः वर्गसङ्घर्ष र प्रकृतिसँगका सङ्घर्षका घटना र प्रक्रियाका जानकारी हुन् । जबदेखि मान्छेले प्रकृतिसँग सङ्घर्ष सुरु ग¥यो, यसैक्रममा समाजको सिर्जना हुन पुग्यो । समाजको उत्पत्ति र विकाससँगै वर्ग..
किन अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय ?
दस वर्षको सङ्घर्षपूर्ण बहसपछि जारी संविधानमा सङ्घीयताको ग्यारेन्टी त गरियो तर यसको व्यावहारिकता र सर्वस्वीकार्यतामाथि अझै बहस जारी छ । खासगरी सङ्घीयताको सीमाङ्कनलगायत मधेसको सवालमा छिमेकीसमेतको चासो र स्वार्थ जोडिएका कारण उत्पन्न समस्याले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । हुनत नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीयता कति व्यावहारिक..
अब दलित आन्दोलनको नेतृत्व महिलाले
विश्वमा परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको सशक्त भूमिका रहेको छ । नेपालमा पनि आधा हिस्सा ओगटेका महिलाले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तै, शैलजा आचार्य, साहना प्रधान, मोती देवीहरु जसले आफ्नो घर परिवार सम्हाल्नेदेखि राजनीतिक आन्दोलनलाई समेत धान्ने हिम्मत राखे । विश्व..
दसैंमा यसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता
केही समय अगाडि एकजना मित्रले चितवनको एउटा पेट्रोल पम्पबाट आफ्नो मोटरसाइकलमा पेट्रोल भर्दा १५ लिटर क्षमता भएको ट्याङ्कीमा १७ लिटर पेट्रोल गएको र आफू सोझै २ लिटर ठगिएको गुनासो गरे । अर्का साथीले काठमाडौँ जाँदा मुग्लिनको एक होटलमा गुणस्तरहीन सादा खानाको रु २०० तिरेको बताए । चार जना सदस्य भएको परिवारमा एक सिलिन्डर ग्यास डेड [&helli..
दुवै छिमेकी हाम्रा शुभेच्छुक किन हुँदैनन् ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दक्षिण र उत्तरका दुवै छिमेकी देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गरेर दुवै देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति आमन्त्रण गरेपछि दुवै देशका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने लगभग निश्चित भएको थियो । दुवै देशका पाहुनाहरूको नेपाल भ्रमणको चर्चा ठूलो उपलब्धिको रूपमा ओली..
यसकारण चाहियो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तलिम नीति
आजको विश्व विज्ञान, प्रविधि, सूचना र सीपको विश्व हो । यस प्रकारका संसारका मूलभूत तत्वलाई शिक्षा, तालिम, उद्योगधन्दा रोजगार आदिका आयतनले मापन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यथार्थ वस्तुनिष्ठ र जीविकोपार्जन विषयलाई पन्छाएर प्राकृतिक सौन्दर्य पारालौकिक परनिर्भरता र शैक्षिक सैद्धान्तिक कोरा ज्ञानका आदर्शले राष्ट्र द..
जनपक्षीय पत्रकारिताका चुनौती
जनपक्षीय पत्रकारिताको चर्चा गर्नुअघि नेपाली सञ्चार माध्यमका केही कटु यथार्थबाट यो छोटो लेखको आरम्भ गरौं । जसरी अधिकांश दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्पादन भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी टेलिभिजन कार्यक्रमम प्रसारित हुने गर्दछ, त्यसरी नै नेपाली समाजमा भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रममको वर्चश्व रहेको छ । अझ भारतीय चलचित्..
एमाले–गुटवन्दीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली
एमालेको जारी केन्द्रीय समिति वैठकमा केपी ओलीको चुट्किला र उखानतुक्का जस्तै हाँसो लाग्दो दृष्य देखिएको छ । वैठकमा सबै नेताहरुले गुटवन्दीको विरोध गरेका छन् । गुटवन्दीको विरोध गर्ने नेताहरुको भने आआफ्नो गुट सक्रिय छ । गुटको सिरानमा उभिने अनि गुटवन्दीको विरोध गर्ने ? यस्तो रमाइलो दृष्य एमालेमा देखिंदैछ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एम..
संविधान कार्यान्वयनका जटिलता
विश्व प्रसिद्ध लेखक ओजी म्यान्डिनोको भनाइ छ, ‘जहिल्यै उत्कृष्ट नतिजा दिने प्रयास गर । किनकि आज रौप्छौ, त्यसको फल पछि मात्र पाउनेछौ ।’ झण्डै एक शताब्दी लामो नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको फल स्वरुप ‘नेपालको संविधान २०७२’ को घोषणा भयो । तर कार्यान्वयनको प्रकृया आज राजनीतिक दलहरुको व्यहोरालाई हेर्ने हो भने ओजीको भनाइ सान्दर्भि..
प्रचण्ड कमरेड ! के लेखौं तपाईँको समर्थनमा ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको चार दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण अत्यन्त सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी सम्झौतामा मातृका कोइरालाले गरेको राष्ट्रघातलाई सच्याउने आशा गरिएको थियोे, गण्डक सम्झौतामा वीपी कोइरालाले गरेको राष्ट्रघातलाई ..
घनश्याम भुसालको भद्रगोल प्रवृत्ति
“…हाम्रो पार्टीको वैधानिक र संस्थागत जीवन अहिले जस्तो कहिल्यै भत्केको थिएन । ..पार्टी भित्र व्यापक गुटबन्दी रहेको छ ।” –घनश्याम भुसाल । असोज ४ गते एमाले पार्टी स्थायी समितिमा सचिव घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको २६ पानाको वैकल्पिक प्रतिवेदनबाट उध्रित गरिएका हु्न् । भुसालले अत्यन्त उचित कुरा उठाउनु भएको देखिन्छ । २०७३ साउन ८..
विषयप्रवेश : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को मुखपत्र (माओवादी) को पूर्णांक १०, २०७३ मा सो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख कमरेड सीपी गजुरेल ‘गौरव’ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन ः वर्तमान सन्दर्भमा’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको छ । त्यसमा थुप्रै विरोधाभासपूर्ण भनाइ रहनुका साथै कतिप..
लोकमानका तीन गल्ती
प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, नाताले सात पुस्ताभित्रका दिदी–भाइबीचको मनमुटाव सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको कार्यविधि नियमावलीमा सात पुस्ताभित्रको नाता–सम्बन्धभित्रका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न नहुने व्यवस्था भए पनि सुशीला कार्की यसप्रका..
रैतीको स्थानबाट हामी कहिले माथि उठ्ने ?
नेपालको लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्ने क्रममा चीनले गरेको गल्तीले नेपालको एउटा सानो जमिनको टुक्रा मात्र गुमेको छ । तर यो गल्तीले गर्दा चीनको परिचय कायापलट गराएको छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा साम्राज्यवादी मुलुकको रूपमा चीनले कुख्याति कमाउनेछ । यस्तो गलत बाटोबाट चीनले आफूलाई सच्याउन सकेन भने उत्पीडित मुलुकहरूको मित्रशक्तिको स्थान पनि ..
प्रधानमन्त्रीलाई जेलबाट ‘जिउँदो सहिद’को खुला पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, इतिहास साच्चिकै निर्मम र कठोर हुँदो रहेछ । म तपाईंहरुकै स्कुलिङबाट जन्मे हुर्केको पात्रहरूमध्ये एउटा सक्रिय पात्र हुँ । महसुस गर्नुहोस अथवा नगर्नुहोस, तपाईं आज फरक दुनियाँको दोसाँधमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र जीवनभर गरिरहने छु । त्यसैले त आज म बन्द पर्खालभित्र विगतभन्दा फरक जीवनको फरक पाट..
व्यङ्ग्य : ओली कमरेडको ब्याटमिण्टन खेल्दाखेल्दै ब्याडथिङ्किङ
ठिकै गरेका थिए उनले ब्याडमिण्टन खेलेर । एकातिर स्वास्थ्य–लाभ भएको थियो भने अर्कोतिर टाइम–पास भएको थियो । दुर्भाग्य जब उनले ब्याडमिण्टन खेल्दाखेल्दै ‘ब्याड–थिङ्किङ्’ गर्न थाले । कुरा यहीनेरबाट बिग्रियो । बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेपछि त झन् उनी बढी ‘बकबके’ र ‘कर्कसे’ भएका छन् । देशले पहिलो संविधान दिवस मनाई राख्दा उनी खुल्लामञ्चम..
संविधान घोषणाको एक वर्ष : बितिहालेको छैन, ढिलाइ भएको छ
संविधान कार्यान्वयन त एउटा गतिमा गइसक्यो । स्थानीय निकाय पुनः संरचना अयोगले कार्यासम्पादनको धेरै काम गरिसक्यो । उच्च अदालतहरु गठन भइ नै सके । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति लगभग भएसरह नै हो । यी चिजहरु अगाडि गइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि गयो नै । तर जुन तीव्रता र गतिका साथ हुनुपथ्यो त्यो भएको छैन । […]
कूटनीतिक मर्यादा र एमाले राष्ट्रवाद
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिको होडबाजीका कारण विगतमा विश्व दुई धुव्रमा विभाजित हुन पुगेको थियो । अमेरिकाले पुँजीवादको नेतृत्व गर्न पुग्यो भने समाजवादी रुसले साम्यवादी धारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । जस कारण साना स्वतन्त्र उत्पीडित राष्ट्रहरु आफ्नो रक्षाका लागि यो वा त्यो ध्रुवमा लाग्न बाध्य हुनपर्ने परिस्थिति सिर्जना गयो । जसकारण..